Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka burburtay External Hard quusin
> Resource > Hard Drive > Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka burburtay External Hard Drive
Ma suroobi karaa waddo inuu ka soo kabsado Faylal ay ka My burburtay External Hard Drive?
My Seagate drive dibadda adag ayaa ku burburtay. Markii aan u xiran la computer, waxaa loo aqoonsan yahay qalab USB hoos disk adag ah. Anigu taas ma furi kartid. Waxaa la sheegay sida qalab aan la garanayn. Aan u isticmaalo computer Windows ah oo aan rabo in dib xogta drive adag dibadda. Ma suroobi karaa waddo inuu ka soo kabsado xogta ka burburtay drive dibadda u adag? Mahad badan.
Tani dhab ahaantii waa dhibaato ah wax aad looga xumaado. Tan iyo markii aad drive dibadda adag weli waxaa laga garan karaa computer, waxaad soo kabsado burburtay karo xogta dibadda drive adag leh barnaamijka xogta dhinac saddexaad ah. Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa doorasho aad loogu talagalay. Waxay awood u in aad ka bogsato sabab u ah shil gaari ku adag, qalad nidaamka iyo tirtirka shil khasaaro xogta. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in iskaan burburtay drive adag dibadeed aad la barnaamijkan in lagu hubiyo sida badan files aad soo kaban karto.
Hel version tijaabo ah Wondershare Data uu soo kabsan oo wuxuu oofin kabashada xogta drive adag dibadda ku burburtay.
Sida loo ka burburtay External Hard Ladnaansho Data la wado? Kaliya 3 Talaabooyinka
Halkan waxaan ku soo kabsado xogta ka drive shil dibadda adag la Wondershare Data Recovery for Windows. Users Mac fadlan version Mac ah oo uu ku sameeyo dib u soo kabashada ee talaabooyin la mid ah.
Tallaabada 1 hab kabashada Select inuu ka soo kabsado files ka burburtay drive dibadda adag
Ka dib markii ay ku rakibidda oo bilaabeyna Wondershare Data Recovery, waxaa lagu siin doonaa 3 hababka soo kabashada, sida aad ka arki kartaa image hoose. Si aad u soo kabsado xogta ka ah drive adag dibadda ku burburtay, halkan waxaan isku dayi leh "lumay Recovery File".
Tallaabada 2 Dooro drive adag aad ku burburtay si Sawirka Data
Barnaamijku wuxuu ku qor doonaa oo dhan qoruhu hoose iyo drives adag dibadda ee your computer. Waxaad u baahan tahay oo kaliya xulo drive dibadda adag oo guji "bilow" in ay sii wadaan.
Tallaabada 3 Hubi files recoverable ceshan iyaga eegista
Scan ku dhameysan doono ugu dhaqsaha badan. Dhammaan waxyaabaha laga helo lagu soo bandhigi doonaa qaybaha. Hubi magacyada file si ay u arkaan in ay yihiin waxa aad ayaa laga badiyay ama aan. Wixii image files, xitaa iyaga oo aad ku eegaan karo.
Markaas waxaad dooran kartaa faylasha aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer. kiraysan ma badbaadin files si aad drive dibadda adag meesha ay lumiyeen waqtigaas ka hor.
Fiiro gaar ah: Ka dib soo kabsaday files, aan aadka u soo jeedinaynaa inaad hagaajin wadid aad dibadda u adag in la isticmaalo mustaqbalka.
About burburtay External Hard Drive Data Recovery:
Haddii xogta ku burburtay drive adag dibadeed aad si macquula burburay, ma suurtowdo in ay u soo kabsadaan. Tani waa sababta ay sidoo kale Wondershare Data Recovery bixisaa version tijaabo ah. Version maxkamad Tani waxay kaa caawin kartaa in aad si aad u hubiso sida badan files aad soo kaban karto, iyo hubi in files helay by tahay waxa aad rabto in aad dib u soo ceshano ama aan.